China High Output 9KW 300L / min Vovoka Masinina Manamboatra Masinina sy mpanamboatra | FRAND
Fitaovana mandeha amin'ny sahan'ny fitsaboana
Masinina maska ​​fitsaboana fiara feno
Masinina fanamafisam-peo mihodina amin'ny sofina
Masinina maska ​​fitsaboana fiara feno tsy misy welding
Milina Clamp Machine
Masinina Valve Tyre
Milina fanaovana Lockset
Masinina fivoriambe socket indostrialy
Fitaovana fanendahana tariby sy fitaovana fanotoana vy
Milina famoahana mandeha ho azy
Relay sy tsipika famokarana contactor
Vokatra avo 9KW 300L / min Masinina fanaovana vovoka manao vovoka
Fomba fanaraha-maso: Fanaraha-maso PLC
Weigtht: momba ny 2Ton
Rafitra saron-tava: 3-4 sosona
Masinina fanaovana maska ​​banga. Izy io no masinina an-tsehatra voalohany amin'ny famokarana sarontava tarehy tsy voarary, masinina mandeha ho azy tanteraka izy io mba hamoahana sarontava banga amin'ny famahanana akora, mampiditra & manapaka tariby orona, mitalaho, mihoa-pefy, mihombo ultrasonika ka manapaka tapa-doha. ary nangonina tamin'ny mpampita.
Famaritana ny masinina fanaovana sarontava tarehy
220V 60HZ na namboarina
Famokarana sarontava tarehy
60-80pcs / min
Fitaovana sarontava tarehy
momba ny 2Ton
Fampiasana masinina fanaovana maska ​​fanary:
Ity milina ity dia misy fitoeran-firaka alimo. Mazava sy tsara tarehy ny bika aman'endriny. Afaka mamita ny fanaovana ny sary indray mandeha miaraka amin'ny lasitra mazava tsara izy io. Miaraka amin'ny ultrason'ny herinaratra avo lenta dia afaka manamboatra tsara ary ny fako dia hivoaka ho azy. Ny fibaikoana ny programa informatika sy ny fikarohana ny photoelectric dia mahatonga azy io hanana fahatokisana avo sy tahan'ny tsy fahombiazana ambany. Ny vokatra dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fandotoana indostrialy avo, ozinina ary toeram-pitrandrahana.
Endri-javatra amin'ny milina fanaovana saron-tava azo esorina:
1. Ampiasao ny teknikan'ny milina alemana tany am-boalohany, isaky ny endri-mason'ny sarontava, aforeto indray mandeha indray ny clip orona sy ny maska ​​amin'ny alàlan'ny fifehezana mandeha ho azy amin'ny teknika ultrasonic. Kalitao maharitra sy fahombiazana avo lenta.
2. Afaka manao maska ​​ny sosona 2-5 manta isaky ny takiana.
3. Hafa noho ny masinina misaron-tava hafa ity, apetrakao ny vondrona fampidirana clip orona: azo ampidirina ny clip orona rehefa mamokatra sarontava izay ilaintsika, avy eo aforeto ny welding sy ny fananganana, manatsara ny mandeha ho azy ary mitahiry ny vidin'ny asa ho an'ny mpanamboatra.
4. Fanaraha-maso PLC, fanisana mandeha ho azy, fiasa mora, vokatra vita tsara tarehy.
5. Fanaraha-maso maotera Servo, fanaraha-maso marina ny refy.
6. Masinina vita amin'ny aliminioma, ireo faritra misy plating, hatsarana mibaribary ary azo ampiharina.
1 Warranty: 1 taona hatramin'ny daty fandefasana. Raha misy fahasimbana mandritra ny vanim-potoana ateraky ny Mpivarotra, ny Mpivarotra dia manolotra fikolokoloana maimaimpoana eo amin'ny tranokala sy fanoloana singa maimaimpoana (Tsy misy ampahany amin'ny akanjo haingana).
2 Manolotra serivisy fikojakojana maharitra ny Mpivarotra, ny vidin'ny asa ihany no ilaina raha mihoatra ny fe-potoana fiantohana. Raha misy faritra simba ilaina fanoloana singa ary tsy ny mpivarotra no omena tsiny, ny Mpivarotra dia manan-jo hangataka vidin-javatra ho an'ny singa fanoloana.
3 Ny mpivarotra dia hamaly izay fitakiana lesoka ao anatin'ny 4 ora amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka ary fax. Ho an'ny serivisy fikojakojana any amin'ny faritanin'i Fujian ao anatin'ny 36 ora, ivelan'ny faritanin'i Fujian ao anatin'ny 72 ora. Ho an'ny fanoloana singa, ny fotoana tena izy dia azo ifampiraharahana miampy.
4 Ny mpivarotra dia manome fiofanana maimaimpoana ho an'ireo mpiasa miasa.
5 Hanome fampahalalana ara-teknika mifandraika amin'izany koa ny mpivarotra, ao anatin'izany ny torolàlana momba ny fiasa sy ny sary amin'ny akanjo haingana
Previous: 1550KG 1 Dingana 50-55 Pcs / Masinina mpanamboatra maska
Manaraka: 55pcs / min 6KG / cm2 Masinina mpanamboatra saron-tava ho an'ny fifehezana ny mason-koditra PLC tsy tenona
F1: orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
A1: Izahay dia orinasa mpanamboatra fonosana ary manamboatra serivisy OEM sy serivisy aorian'ny fivarotana.
F2: Ahoana no ahafantarako fa mandeha tsara ny masininao?
A2: Alohan'ny hanaterana azy, hizaha toetra ny masinina miasa ho anao izahay.
fitaovana fanaovana sarontava
masinina fanamboarana sarontava
milina fanaovana maska ​​tsy tenona
Taratasy fitsaboana saron-tava fitsaboana telo sosona telo sosona ...
10KW 30-40PCS / Min fanaovana tarehy saron-tava mandeha ho azy ...
Milina fandotoana saron-tava fanaovana masinina amin'ny al ...
Fitaovana mandeha ho azy Nonwoven 3 Layer Fac ...
40 Pieces / Min N95 Face Mask fanaovana mason-tarehy
Masinina haingam-pandeha hozatra N95 feno haingam-pandeha
masinina fanaovana maska ​​tarehy, milina fanaovana maska ​​tsy tenona, milina fanaovana sarontava tarehy tsy tenona, milina clamping hosotra, milina fanaovana sarontava, masinina mpanamboatra sarontava tarehy,